မိုးကောင်းကင် - ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ
ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ ၁၉၃၆ ခုနှစ်က ၀က်ထီးကန် မြို့လေး နား ကျောက်ကွင်း ရွာ ကလေး မှာ ခရစ်ယာန် နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာ သာ တို့ ရဲ့ အယူဝါဒ ကွဲလွဲ မှုလေး တွေ ကို ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ပွဲလေး အကြောင်းပါ။ ဒီအကြောင်းအရာလေး က အရင်က စာ အုပ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် အခု အဲဒီစာအုပ် ကို ရှာ ဖတ်ဖို့ရာ တော်တော် ခက်ခဲ နေပါပြီ။အခု ဒီစာအုပ်လေး ကျွန်တော်ဆီရောက်နေတာကတော့ တော်တော် ကြာနေပါပြီ...ဒါပေမယ် PDF ဖိုင်နဲ့ ဖြစ်နေလို့ ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း မရိုက်နိုင်တာနဲ့ မတင်ဖြစ်တာပါ။ အခု word ဖိုင်အနေနဲ့ ပြောင်းပြီးလို့ တင်မယ်လုပ်တော့်လည်း တစ်ချို့ စာတွေက ပြန်ပြင်ရတာတွေ ပါ နေပါတယ်။ အခုပြင်ပြီးသ လောက်လေးတွေကို တင်တင်ပေးသွားပါမယ်..... လိုချင်တဲ့သူများရှိရင်လည်း ကော်ပီကူးပြီးတော့ print ထုတ်လို့ ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ပြည်ခရိုင် ၀က်ထီးကန်မြို့ကလေးမှာ လေးမိုင်ခန့်ကွာဝေးသော နေရာ၌ မြေပြန့်ချင်းအမျိုး သားများ နေထိုင်သော ကျောက်ကွင်းအမည်ရှိ ချင်းရွာကလေးတစ်ရွာရှိသည်။ အိမ်ခြေ (၇၀) ကျော်မျှရှိ၏၊ ပတ်ဝန်းကျင်များသည် မြန်မာရွာများဖြစ်သော်လည်း ကျောက်ကွင်းရွာနှင့် ၄င်း၏အနီးတွင်ရှိသော ညောင်ပင်သာရွာတို့မှာ ချင်းအမျိုးသားများ သာနေထိုင်သောချင်းရွာနှစ်ရွာဖြစ်လေသည်။ ၄င်းရွာနှစ်ရွာ စလုံးသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ နေထိုင်သော ရွာများဖြစ်၍ ကျောက်ကွင်းရွာ၌ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိပြီးဓမ္မဆရာ ဦးရွှေအောင်နေထိုင်သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ချင်းအမျိုးသားအိမ်ထောင်စု ငါးခုမျှသာရှိသည်။ ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကျောက် ကွင်းရွာမှာ သေးငယ်သော်လည်း သူကြီးမင်းနေ ထိုင်သော ရွာဖြစ်သောကြောင့် ထင်ရှားသည်။ အခြားအကြောင်းတစ်ခုမှာလည်း ရွာသူကြီး ဦးလှောင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ချင်းအမျိုးသာဖြစ်၍ ဇနီးမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ချင်းအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးစားပေးထားကြသောကြောင့် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးမှာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိကြသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မယားက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတက်သည်။ ဥပုသ်နေ့တွေင် လင်ယောင်္ကျားက အခြားရွာရှိ မြန်မာဘုန်း တော်ကြီး ကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ဥပုသ်စောင့် သီလ ဆောက်တည်သည်။ နာတာလူးပွဲ ခရစ်စမတ်ပွဲများကို မယားကဆင်နွဲပြီး လင်ယောင်္ကျားက ကထိန်ပွဲ ၀ါဆိုပွဲ ညောင်ရေသွန်းပွဲများကို ဆင်နွဲသည်။ မယား၏ ဘာသာရေးအလှူကို လင်ယောင်္ကျားက လိုက်လျော၍ လင်ယောင်္ကျား၏ ဘာသာရေး အလှူကိုလည်း မယားက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခမရှိသည့် သဘောထားကြီးသော ဇနီး မောင်နှံတို့ပင်တည်း။ သို့သော် ဦးလှောင်မှာ ရပ်ရွာ၏ အကြီးအကဲ သူကြီဖြစ်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကလည်း အရေး ကိစ္စရှိလျှင် ဦးလှောင်ထံသို့သာ ဦးတည်၍လာသည်။ခရစ်ယာန်ဘက်ကလည်း ထိုနည်းတူပင်၊ နှစ် ဘက်ဘာသာရေးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဦးလှောင်Aိမ်တွင်သာ တည်းခိုကြသည်။ ဦးလှောင်တို့၏ ဇနီး မောင်နှံက ကျွေးမွေးအည့်ခံရသည်။ ဦးလှောင်မှာ သူကြီးမင်းဆိုပေမယ့် ချမ်းသာကြွယ်ဝလှသူမဟုတ်။ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသော ခိုင်းကြေးဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ဖန်တီးနေရသူ ဖြစ်ပေရာ ကြာသော် စီးပွားရေး ထိခိုက်လာသည်။ ဤအတိုင်း ဘာသာရေးနှစ်ခုအတွက် နှစ်ဘက်ကုန်ကျနေရလျှင် ရေ ရှည်မတတ်နိုင်၊ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး ဘာသာတစ်ခုတည်းကို ကူးပြောင်းကိုးကွယ်မှ သက်သာ ချေမည်။ ဤအတွေးဖြင့် မိမိ၏ ဇနီးအား ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရာ သူကြီးကတော်က ဘာသာတစ်ခုတည်းကို ကိုးကွယ်ရန်မူ သဘောတူသည်။ သို့သော် မိမိကိုးကွာသည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ မိမိလင် ယောင်္ကျားသူကြီးကို ပြောင်းလဲ ကိုးကွယ်စေချင်သည်။ သူကြီးမင်းကလည်း ကြင်ယာသက်ထား ဇနီးမ ယားအား ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်စေချင်သည်။ ကိုယ့်ဘာသာဘက်ကို ကူးပြောင်းစေ ချင်သည့် ဆန္ဒချင်း တူညီနေသဖြင့် မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာကောင်းကြောင်း မှန်ကြောင်း နှစ်ဦးလုံးပင် ပြောကြသည်။ သို့ရာတွင် မယားပြောသည်ကိုလည်း လင်ကသဘောမကျနိုင် လင်ပြော သည်ကိုလည်း မယားက နားမလည်နိုင်နှင့် လုံးလည်လိုက်၍ နေလေသည်။
ဤတွင် သူကြီးကတော်က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအား ကယ်တင်ပေးပါဟု ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်အား အကူအညီတောင်းတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဦးရွှေအောင်သည် ညဘက်တွင် သူကြီးအိမ်သို့ လာ၍ ခရစ်ယာန်တရားကို ဟောသည်။ သူကြီးဦးလှောင်သည် ပရိယတ္တိစာပေ မတတ်ကျွမ်းသော်လည်း ဆရာတော်များထံမှ ရရှိထားသော ပညာဗဟုဿုတဖြင့် ဦးရွှေအောင်ဟောပြောသမျှကို ပြန်လှန်၍ညင်းချက်ထုတ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကန်ကြောင်းကို မိမိတတ်သမျှ ပြောပြသည် ဦးရွှေအောင်ကလည်း ဦးလှောင်ပြောသမျှကို ချေဖျက်၍ ငြင်းချက်ထုတ်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်နှင့် သူကြီးမင်းဦးလှောင်တို့၏ အငြင်းအခုံသည် ထင်ရှားလာ၍ ညဘက်တွင် ရွာသားများပင် လာရောက်နားထောင်ကြသည်။ သို့သော် အဖြေကားထွက်မလာချေ။ ဦးရွှေအောင်ကလည်း သူကြီးမင်းသဘောကျအောင်မဟောပြောနိုင်၊သူကြီးမင်းကလည်း ဦးရွှေအောင် ကို နိုင်အောင် မပြောနိုင် ၊ သူတို့နှစ်ဦးလည်း လုံးလည်လိုက်၍ နေကြပြန်သည် ရက်မှသည်လသို့ ၊ လမှ သည် နှစ်သို့သာ ကူပြောင်းခဲ့သည်။ဤအကြောင်းကားမထူးသေးပေ၊ နှစ်ဘက်သော ထောက်ပံ့ကြေး ကြောင့် စီးပွားရေး မဟန် သည့်အပြင် ကြွေးပင်အနည်းငယ်တင်လာသည်။ သည်အတိုင်းမဖြစ်သေး၊ ဤကိစ္စကို ပြတ်အောင်လုပ်မှ ဖြစ်မည်။ သူကြီးမင်းတွေးရလေသည်၊ တစ်နေ့တွင် အကြံကောင်းတစ်ခု ကို တွေး မိသည် ဦးရွှေအောင်သည် ညအိမ်သို့လာလျှင် တင်ပြမည်။ ထိုနေ့တွင် ဦးရွှေအောင် ရောက်လာသောအခါ၌ သူကြီးမင်းဦးလှောင်က မိမိ၏ အကြံအစည်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလေသည်။
``ဒီမယ် ဆရာအောင် ခင်ဗျားနှင့်ကျူပ်တို့ ကိုယ့်ဘာသာတရားကောင်းကြောင်း ငြင်းခုံနေကြတာလည်း ကြာလှပြီ ။ ဘာမှလည်း အဖြေမထွက်ဘူး၊ လဘက်ရည်ကြမ်းနှင့် လဘက်သုတ်သာ ကုန်ပြီး လူမော တာပဲ အဖတ်တင်သည်။ ဘာမှလည် အကျိုးထူးမလာဘူး။ အဲဒီတော့ တစ်ခုခုတော့ အပြောင်းအလဲလုပ်မှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဟော…သူကြီးမင်းက ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာလဲဗျ ၊ တစ်နေ့ နေ့တော့ အဖြေထွက်လာမှာပေါ့ဗျ ၊ သူကြီးမင်းက ဘယ်လိုများ ပြောင်းလဲချင်တာလည်းဗျ ´´
``ဒီလိုရှိတယ် ခင်ဗျ ၊ ဦးရွှေအောင်ပြောတာလည်း ကျွန်တော်ကမယုံနိုင် ကျွန်တော်ပြောတာလည်း ဦးရွှေအောင်က လက်မခံနိင်ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းသွားနေလို့တော့ မဟန်ဘူးဗျ။ အဲဒါ သူကြီးမင်းက ဘယ်လိုလုပ်ချင်လာဗျ ပြောပြပါဦးလေ ´´
``ဒီလိုဗျာ..ဆရာအောင်ကလည်း ခရစ်ယန်တရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကို ရှာဗျာ ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတစ်ဦးကို ရှာမယ်´´ ။ ``အင်းလေ…ပြောပါဦး´´။ ``အဲဒီဆရာနှစ်ယောက် အပြိုင်အဆိုင်ပြောကြားစေဗျာ ၊ ငြင်းကြခုံကြစေဗျာ ၊ သူတို့က ဆရာအောင်နှင့် ကျွန်တော်ထက် တော်တဲ့ တတ်တဲ့ လူတွေဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ပြောကြရင်း တစ်ခုခုတော့ အဖြေထွက်မှာပဲဗျ။ အဲဒီလိုဆိုရင် မကောင်းဘူးလား ဆရာေAာင်ရဲ့´´။ ``ကောင်းသားပဲ သူကြီးရဲ့ ၊ဒါပေမယ့် အဲဒီဆရာတွေ ဒီကိုလာဘို့ ကျွေးဘို့ စရိတ် စကတွေ တော့ ခံမှဖြစ်မယ်ဗျ ´´။``အဲဒါဟုတ်တာပေါ့ ကျွန်တော်တို့က ခေါ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကပဲ စရိတ်ခံရမှာပေါ့ ဆရာအောင်ရယ်´´ ``ဒီလိုဆိုရင် စရိတ်အတွက် ဒီလိုလုပ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်၊ သူကြီးတို့ဆရာအတွက် သူကြီးတို့ဘက်က တာဝန်ယူဗျ ၊ ကျွန်တော်တို့ဆရာအတွက်လည်း ကျွန်တော်တုိ့ ဆရာAတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်တွေက စုပေါင်းကျခံမယ်ဗျ ´´။
ဦးရွှေအောင်၏ ပြောပြချက်မှာ မျှတသဖြင့် သူကြီးက သဘောကျသည်၊ ဦးရွှေအောင်နှင့် သူ ကြီး အိမ်တွင် ရောက်နေကြသည့် ချင်းအမျိုးသားခရစ်ယာန် ပရိသတ်ကလည်း သဘောကျကြသည်။ သို့သော် သူကြီးမှာ တစ်ဦးတည်း ဖြစ်နေသဖြင့် ရွာထဲရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်သုံးအိမ်မှ လူကြီးမျာကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုသူများရောက်လာသောအခါ ကျောက်ကွင်းရွာ၏ မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက် တွင်ရှိသော ဗမာရွာများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီးများကို အခေါ်ခိုင်းလို်က်သည် ၊ တစ်နာရီခန့် ကြာသော အခါ ထိုရွာများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီး ရှစ်ဦး လိုက်ပါလာကြသည်။ သူကြီးဦးလှောင်ကား အင်္ဂလိပ်အ စိုး ရက ခန့်အပ်ထားသော ဒိုင်နယ်သူကြီး ဖြစ်သဖြင့် စည်းစနစ်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြောဆိုလုပ် ကိုင် ရာတွင် တိကျစေ့စပ်သည် ၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ဘက်သောလူကြီးများနှင့် အကြေအလည် ဆွေးနွေးကြ ပြီးနောက် သူကြီးကတော်ထံတွင် စာရွက်တောင်းပြီး ဦးရွှေအောင်အား ရေးသားစေလျှက် အောက်ပါ အချက်များ ပါဝင်သည့် သဘောတူညီချက်ကို စာချူပ်အဖြင့် ချူပ်ဆိုလိုက်လေသည်။
၁။ ကျောက်ကွင်းရွာသူကြီး ဦးလှောင်အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ၄င်းရွာနေ ဓမ္မဆရာ ဦးရွှေ အောင်ပါ ခရစ်ယာန်များက အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ စာချူပ်ပြုလုပ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ကြ သည်။
၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှဏ်မျိုး၌ မည်သည့်တရားက ကောင်းသည် မှန်သည်ဟု
၃။ ဤသို့ယှဉ်ပြိုင်ပွဲကြီးပြု လုပ်ရန်အတွက ကျောက်ကွင်းရွာ၏ နောက်ဘက်လယ် ကွင်းကြီးထဲ၌ မဏ္ဍပ်ကြီး တစ်ခုထိုးရန်။
၄။ ထိုမဏ္ဍပ်ကြီးထိုးရန်အတွက် ခရစ်ယာန်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အညီအမျှ ထက်ဝက်စီ ကုန်ကျခံ၍ ပြုလုပ်ကြရန်။
၅။ မဏ္ဍပ်ကို (၁၅)ပင်၊ (၁၄)ခန်းထိုးကြရန်။ ဤမဏ္ဍပ်ကို ခရစ်ယာန်တို့က (၇)ခန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ
တို့က (၇)ခန်း အညီအမျှထိုးကြရန်။
၆။ ခေါင်းဆောင်ဖိတ်ကြားသော ဘာသာဆိုင်ရာ ဆရာများကို ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့က စရိတ်ခံ၍ ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့က စုပေါင်းကျခံကြရန်။
၇။ မိမိတို့အဖွဲ့ သဘောကျရာဆရာများကို မိမိတို့သဘောအတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်သလို ရှာဖွေ ခေါ်ဆောင်ကြရန်။
၉။ ထိုသို့ ဟောပြောပြီးသောအခါ တစ်ဘက်မှ တစ်ဘက်ဘာသာသို့ တစ်အိမ်ထောင်တိတိ ကူးပြောင်းကြေညာနိုင်လျှင် ထိုသို့ကြေညာနိုင်သော ဘာသာဘက်က နိုင်သည်ဟု ဆုံးဖြတတ်ရန်။
၁၀။ ရှုံးသောဘာသာဘက်မှ လူကြီးများက နိုင်သောဘာသာဘက်က လူကြီးများသို့ ငွေကျပ်ငါး
၁၁။ ငါးဆယ်အနိုင်ရရှိသောဘက်က ထိုငွေဖြင့် အောင်ပွဲအဖြစ် ရွာပြင်၌ ဇာတ်ပွဲတစ်ချီကစေ၍ ရွာရှိလူကုန် ပွဲကြည့်ကြစေရန်။
၁၂။ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောပွဲကြီး ကျင်းပမည့်ရက်ကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခု၊ မေလ(၁)ရက်နေ့၊
ဗမာသက္ကသရာဇ် (၁၂၉၈)ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်၊သောကြာနေ့ကို သဘောတူ သတ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကိုယ်စား သူကြီးဦးလှောင်က လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ခရစ်ယာန်တို့ကိုယ်စား ဓမ္မဆ
အလိုတော်ရရွာသည်ကျောက်ကွင်းရွာ၏အနောက်မြောက်စွန်းစွန်းနှစ်မိုင်ခွဲခန့်အကွာတွင်ရှိသည်။ ထိုရွာ တွင် ၀ါတော် (၆၅)၀ါ ၊သက်တော်(၈၅)နှစ် ရှိတော်မူသော ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးတော်မူသည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးတော်ရာရွာကို အစွဲပြု၍ ဆရာတော် ဘု ရားကြီး ဦးစီးတော်မူသော ဂိုဏ်းကို အလိုတော်ရဂိုဏ်းဟု ခေါ်ကြသည်။ အလိုတော်ရဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိလေသည်။ သူကြီး ဦးလှောင်နှင့် ကျောက်ကွင်းရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူကြီးများသည် ၀ါဒပြိုင်ပွဲ စာချူပ်ချူပ်ဆိုပြီးနောက် မဏ္ဍပ်ထိုးရေး ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးတို့ကိုသည် အဓိကထား၍ လုံးပန်းနေကြသည်။ ၀ါဒပြိုင်ပွဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် များ ဘက်မှ ယှဉ်ပြိုင်ဟောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖွေရေးအတွက်မူ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိဋကတ် စာပေ တတ်ကျွမ်းသော ဆရာတော် ရဟန်းတော်များ ရှိနေသဖြင့် ပူပန်ကြောင့်ကြမှု မထားကြချေ။ ဘယ် ဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြော နိုင်မည့်ဟု ယူဆထားကာ ခပ်အေးအေးပင် နေကြသည်။ ခရစ် ယာန်များဘက်ကမူ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို အဓိကထား၍ စည်းဝေးကြသည်။ အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံးဆရာကို ရအောင်ရှာဖွေပြီး ပင့်ဖိတ်ရန် ဆွေးနွေးကြသည်။ ငွေဘယ် လောက်ကုန်ပါစေ၊ ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ရှာဖွေထည့်ဝင်ကြသည်။ ဤအရေးသည် ကျောက်ကွင်းရွာ တစ်ရွာတည်း၏ အရေးမဟုတ် ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ခုလုံး၏ အရေးဖြစ်သည်။နိုင်မှ ဖြစ်မည် ။ ထို့ကြောင့်ဓမ္မဆရာ ဦးရွှေအောင်အား ရန်ကုန် မန္တလေးစသော မြို့ကြီးများသို့ သွားရောက်ရန် တာဝန်လွဲလိုက်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဘက်က နီးစပ်ရာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်များကို လျှောက်ထားကြည့်တော့မှ မလွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အများစုမှာ ပိဋကတ်တော် တတ် ကျွမ်းကြပါ၏ ။ ခရစ်ယာန်အကြောင်း တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မသိရှိကြချေ။ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသဖြင့် မလေ့လာကြ ။ ခေတ်ပညာမတတ်ကြ ၊ ထို့ကြောင့် ခေတ်အမြင်လည်း မရှိကြပဲ ပိဋကတ် တစ်ဖက် မြင်များသာ ဖြစ်ကြလေသည်။
ဦးလှောင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်စုသည် ဤကိစ္စအတွက် ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးကို လျှောက် ထား တိုင်ပင်မှ ဖြစ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ၊ စာချူပ်ကိုပါ တိုင်ပင်ပြီး အလိုတော်ရဂိုဏ်းချူပ် ဆရာ တော်ကြီးထံသို့ သွားရောက်လျှောက်ထားကြလေသည်။ စာချူပ်ကိုလည်း ပြသကြ၏ ၊ ဆရာတော် ကြီးမှာ သက်တော်ကြီး၍ နားလေးနေသဖြင့် ဦးပဇင်းကြီးတစ်ပါးမှ တစ်ဆင့် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် လျှောက်ထားရသည်။ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးသည် လျှောက်ထားချက်ကို နားလည်သွားပြီးနောက် စာချူပ်ကို ဖတ်ရှုတော်မူသည်။ ထို့နောက် ဂိုဏ်းအတွင်း သံဃာ အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး သင့်တော် သလို စီမံပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှောင်တို့အား မိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေသည်။ ဦးလှောင်တို့ လူသိုက်သည် ပူပန်မှု လျော့ပါးသွားသော်လည်း စိတ်မောလူမောဖြစ်ကာ ပြန်လာကြရသည်။ ရွာတွင် အသင့်စောင့်နေကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက စီမံပေးတော် မူ မည့် အကြောင်းသာ ပြန်ကြားရပါတော့သည်။
ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ဂိုဏ်းဝင်ကျောင်းပေါင်း(၈၀)ကျော်မှ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်
များ ကို ပင့်ဖိတ်စေ၍ အလိုတော်ရကျောင်းတွင် စည်းဝေးစေသည်။ ဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်အသီးသီး
က အကြံအမျိူးမျိူး လျှောက်ထားကြသော်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ် ဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော် ဘုရားထဲမှ ပေါ်ထွက်မလာဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ဤအရေးအခင်းမှာ အလိုတော်ရဂိုဏ်း၏ အရေးအခင်း သာမကဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာ တော်အတွက် အရေးကြီးသော အရေးအခင်းဖြစ်သည်ဟု ဂိုဏ်းဝင် ဆရာတော်အားလုံးကပင် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သဘောထားကြသည်။ မိမိဂိုဏ်းထဲမှ ယှဉ် ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမထွက်သော်လည်း ရဟန်းသာမဏေ ရှစ်သောင်းကျော်မျှရှိသော မြန်မာနိင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောရဲမည့် အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် မျိူးတွေ့အောင်ရှာ၍ရ အောင် ပင့်ဆောင်နိုင်ဘို့သာ အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ဂိုဏ်းဝင် ကျောင်းဆရာတော်တို့သည် မြို့၊ ရွာကြီးလျှင် ငွေတစ်ဆယ် ၊ ငယ်လျှင် ငါးကျပ်ကျ ထောက်ပံ့ ကူ ညီ ကြရမည်ဟု ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းထောက် ပံ့ကြရာ ငွေကြေးအတွက် ပူပန်စရာ မရှိတော့ဘဲ အားလုံးပင် ပြည့်စုံသွားကြလေသည်။
ထိုနောက် ဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်တို့သည် အသီးသီး တာဝန်ယူကြပြီး အလိုတော်ရဂိုဏ်းချူပ် ဆရာ တော်ကြီး၏ ကျောင်းတွင် ဌာနချူပ်ပြုလုပ်၍ ရန်ကုန် မန္တလေး ပခုက္ကူ ပုသိမ် မော်လမြိုင်စသော မြို့ကြီးများရှိ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်များ နာမည်ကျော် ဆရာတော်များထံသို့ ဂိုဏ်းဂဏမရွေးချယ်ဘဲ စာရေးလျှောက်ထားကြသည်။ ကြေးနန်းရိုက်၍ အကြောင်းကြားကြသည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မကြွနိုင် လျှင်လည်း ကြွရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ညွန်ကြားကြပါရန် ၊ အကြောင်းစုံ လင်စွာ ဖြင့် လျှောက်ထားကြသည်။
သို့ရာတွင် မန္တလေး ၊ ပခုက္ကူစသော မြို့ကြီးများမှ မည်သည့်ပြန်ကြားချက်ကိုမျှ မရရှိခဲ့ပေ။ ရန်ကုန်မှ ဆရာတော်အချိူ့ကမူ ဓမ္မကထိက ဦးဥေယျကို ပင့်ဖိတ်ရန် အကြံပေးစာ ပြန်ကြားပြန်သည်။
ဦးဥေယျသည် ထိုအချိန်က နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ဖြစ်၏ ။ အသံကောင်းသည် အဟောအပြော ကောင်းသည် ၊အာဝဇ္ဇာန်းရွှင်သည် ၊ ထို့ပြင် လောကမျက်မှန်စာစောင်၌ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ရှုပ်ချသည့်စာများကို ရေးသားနေသဖြင့် လူသိများ၍ ကျော်ကြားသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ ဟောပြောရမည့် ဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲတွင် ဦးဥေယျ သည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယူဆပြီး ရန်ကုန်ဆရာတော်အချိူ့က ညွန်ကြားကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
အလိုတော်ရဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်တို့ကား နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက သာယာဝတီ ဦးဥေယျ၏အမည်ကို ကြားဖူးကြသည်။ အဟောအပြော ကောင်းကြောင်းလည်းကြားဖူးကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ရှုပ်ချရေးသားနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသောအခါ ပိုမိုအားတက်ကျသည်။ ထို့ကြောင့် ဂိုဏ်း ချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား အကျိူးအကြောင်း လျှောက်ထားတင်ပြသော အခါအ မြန်ဆုံး ပင့်ဖိတ် အကြောင်းကြားရန် အမိန့်ရှိတော်မူလေသည်။
ဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်တို့သည် ဦးဥေယျထံသို့ အကြောင်းစုံ စာရေး၍ လျှောက်ထားပန်ကြားကြသည်။ ဆရာတော် ဦးဥေယျကို ပင့်ပြီဟူသော သတင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဘက်က ဓမ္မကထိက အကျော် သာယာဝတီ ဦးဥေယျဆရာတော်ခေါင်းဆောင်၍ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည်ဟူသော သတင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ပြန့်နံ့သွားတော့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်အများစုမှာ ဦးဥေယျကို ကြားဖူးနေကြသဖြင့် အားတက်နေကြသည်။ လောကမျက်မှန်ကို ဖတ်ဖူးသူများကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က နိုင်ပြီဟု တစ်ထစ်ချ တွက်ဆနေကြ၏။ ဤသတင်းကား ခရစ်ယာန်တို့ဘက်သို့အထိ ပြန့်နံ့သွားလေသည်။
သို့သော် အမှန်တကယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကား ဆရာတော်ဦးဥေယျထံမှ မည်သည့်ပြန်ကြားချက်ကိုမှ မရရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။ အလိုတော်ရဆရာတော်များက နောက်ထပ်၍ တောင်းပန်စာရေးကြပြန်သည်။ စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီး ကြေးနန်းရိုက်၍ သတင်းပို့ကြသည်။ ဦးလှောင်တို့ကလည်း ဦးဥေယျကို ပင့်သည်ဟု ကြားရသဖြင့် ပျော်ရွှင်အားတက်နေကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ်စာရေး၍ ကြေားနန်းပို့ သော် လည်း ပြန်ကြားချက်ကို မရရှိကြသောအခါ အလိုတော်ရဂိုဏ်းမှ ဆရာတော်အချိူ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ ကို်ယ်တိုင်လိုက်သွားကြပြီး ဆရာတော်နှင့်ဦးဥေယျနှင့် တွေ့ဆုံကာ လျှောက်ထားတောင်းပန်ကြ၏။ အမျိူးမျိူးလျှောက်ထားကြ ၏။ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပချက်မရှိဘဲနှင့် ဦးဥေယျက ငြင်းလွတ် လိုက် သည်။ မန္တလေး၊ ပခုက္ကူစ သည်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပင့်ကြပါဟု လီးလွဲညွန်ကြားလိုက်သည်။ ခရစ် ယာန် ဘက်မှ ဘုန်းကြီးလူထွက် ဓမ္မဆရာကြီးများ ပါလိမ့်မည်ဟူသော သတင်းကို ဦးဥေယျ ကြား သိပြီး ဖြစ်ဟန်တူ ၏။ အချင်းချင်းတော့ ဆော်ရဲသည် ထိုသည့် ဦးဥေယျ ကိုယ်တော်ကြီးကား နယ်နယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် ခရစ်ယာန်နှင့်သာ ယှဉ်ပြိုင် ဟောပြောခြင်း မပြုရဲသော်လည်း ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ အ ချင်းချင်း ဘ၀တူရဟန်းချင်းကိုမူဆော်ရဲနှက်ရဲ၏ ။ ပိဋကတ်အရာ မယှဉ်သာအောင် မိမိထက် အများ ကြီးသာ လွန်သော အရှင်အာဒိစ္စာဝံသ ဆရာတော်ကို ဂျူဗလီဟော ပကာသနီယျ အစည်း အဝေး ပွဲကြီး၌ ``ဘုန်းကြီး ဦးတူး ချီးလူးသည့် ပုံပြင်´´ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ဆော်နက်၍ ပွဲကျအောင် ပြော ၀ံ့သူဖြစ်၏။ `လူပြန်တော်ပညာရှိတစ်ဦးကို ရေးခိုင်းပြီး သူက အမည်ခံကာ နေစရာရှာမရ မလက ကွင်း ပြင် ပမာနစာရင်းဝင်တယ် အဖျင်းတွင်ထိပ်ဆုံး အာဒိစ္စ ယောက်ဖကုလားနာရယ် ဘောက် ကျတာတွေ လျှော့လိုက်ပါဦး ´ အစရှိသော တေးထပ်ကဗျာကို သတင်းစာတွင် ထည့်ရဲသူ အာဇာ နည် ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးပေတည်း။
အလိုတော်ရ ဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်များအား စိတ်ပမ်းလူနွမ်းဖြစ်ကြကာ ရန်ကုန်မှ ပြန်လာခဲ့ကြရ၏။ မန္တလေး၊ပခုက္ကူ၊စသည် မြို့ကြီးများမှ ပြန်ကြားချက်ကို မျှော်လင့်ရန်သာ ရှိတော့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုမြို့များမှ ပြန်ကြားချက်ကို မရခဲ့ပေ ။ ဦးဥေယျ၏ ငြင်းဆိုလုိက်ကြောင်းကို ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား မလျှောက်ထားဘဲ ဖုန်းကွယ်၍ ထားကြ၏ ။ မောင်အေယျ မရောက်သေးဘူးလားဟု နေ့စဉ်မေးနေသောကြောင့် ကြာရှည်ဖုန်းကွယ်ထားရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပေ၊ အချိန်မှာလည်း တစ်ဖြေးဖြေး ကုန်သည်ထက်ကုန်လာ၍ ကဆုန်လဆန်းသို့ပင် ဆိုက်ရောက်လာချေပြီ ။ ထို့ကြောင့် ဦးဥေယျ မလာနိုင်တော့ကြောင်းဖွင့်ဟ၍ လျှောက်ထားရတော့သည်။ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာ အလွန် ပင် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်တော်မူရှာသည်။ တပည့် ဆရာတော်များက မန္တလေး၊ပခုက္ကူ တို့မှ အကြောင်း ပြန်ကြားချက် မရရှိသေးကြောင်း မကြာမှီရမည်။ ထင်ကြောင်းစသည်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင် လျှောက်ထားကြရသည်။ အလိုတော်ရကျောင်းသို့ အမြဲသတင်းမေးနေသော ဦးလှောင်တို့မှာလည်း ဦးဥေယျ မကြွရောက်နိုင်ကြောင်း သိသွားကြသဖြင့် အလွန်စိတ်အားငယ်သွားကြသည်။ ဂိုဏ်းချူပ် ဆရာတော်ကြီးက ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမှာပဲ ဟူ၍သာ တွေးတောပြီး စိတ်ကို ဖြေနေကြရသည်။
ခရစ်ယာန်တို့ကလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ၊မော်လမြိုင်၊မေမြို့၊ တောင်ငူစသော မြို့များရှိ ဂိုဏ်းအုပ်ဂိုဏ်းချူပ်များထံသို့ စာရေး၍၄င်း လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍၄င်း၊ အကျိူးအကြောင်းရှင်း
ပြ၍ ဆွေးနွေးကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းများကလည်း အချင်းချင်း ဆွေးနွေး၍ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပေးကြသည်။ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပြင် အထောက်အကူပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ အရံ လိုက်ပါမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါ ရွေးချယ်ပေးသည့်အပြင် ငွေကြေးများပါ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ၍ ထောက် ပံ့ကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်နှင့် ခရစ်ယာန်အုပ်စုမှာကျိန်းသေနိုင်ပြီဟုတွက်ဆကာ ပျော် တပြုံးပြုံး မော်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်။ မိမိတို့တာဝန်ယူထားရသည့် မဏ္ဍပ်အစိပ်အပိုင်းကို အစွမ်းကုန် မွမ်းမံချယ်လှယ်နေကြသည် ခရစ်ယာန်တို့ဘက်မှ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းတွင် ဦးရွှေမှန် ၊ ဦးသာဒင်(ရန်ကုန်) ဦးသာဒင်(မန္တလေး)တို့၏ အမည်များမှာ ထိပ်ဆုံးမှ ပေါ် ထွက်လာ၏ ။ ဦးရွှေမှန်သည် အင်းစိန်ကျမ်းစာသင်ကျောင်း ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်၏ ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချူပ်ကြီး၏ နာယကကြီးလည်းဖြစ်၏ ။ ပါဠိပိဋ ကတ်အရာတွင် ပထမကျော်အောင်ခဲ့သည့် ဘုန်းကြီးလူထွက်ဖြစ်၏ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာ သာသို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်၏ ၊ ဦးသာဒင်နှစ်ဦးလုံးမှာလည်း ထိုခေတ်က ပထမကြီးတန်း အောင် မြင်ခဲ့သော စာချဘုန်းကြီးလူထွက်များ ဖြစ်ကြ၏ ။ ပိဋကတ်ကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနောက်၍ မွှေနိုင် သူများဟု နာမည်ကျော်နေသူများ ဖြစ်ကြ၏ ။ ဦးရွှေမှန်နည်းတူ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သူများ ဖြစ်၍ အဟောအပြော အလွန်ပင်ကောင်းသည့် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ ကြီး များ ဖြစ်ကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သုံးဦးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယှဉ်ပြိုင်ချေဖျက်ရာ၌ စံပြစရာအကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးများပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာပေ နှင့် သမ္မာကျမ်းစာများကိုပါ ကျွမ်းကျင်ကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ကို ကျွန်းကျင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့ ကျိန်းသေ အောင်ပွဲဆင်ရမည်ဟု ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်တို့ဘက်မှ ဟိန်းဟောက်ထားသည်မှာ ဟိန်းဟောက် လောက်ပါပေ၏ ။
ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးကား ဆွမ်းဘုဉ်းမပေးနိုင်သည်အထိ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေလေသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် စစ်မှန်သောဝါဒဖြစ်ပါလျှက် ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြော
မည့်သူ မရှိသောကြောင့်သာ အရေးနိမ့်ရလျှင် သာသနာတော်၌ အသက်ရှင်လျှက် နေဖို့ပင် မ ကောင်း တော့ ၊ သေသော်မတည့် အော်… ကောင်း၏ ။ဟူသော အဆင့်မျိူးသို့ ဆိုက်ရောက်နေချေပြီဟု တွေး တောကာ စိတ်မောနေရလေသဖြင့် အဟာရကိုပင် ကောင်းစွာ မဘုဉ်းပေးနိုင်တော့ချေ။ ပြိုင်ပွဲ သ တင်း ကား မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတစ်ဝိုက်နှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဟင်္သာတ ၊မြန်အောင်၊ ကြံခင်း ၊ ကနောင် ဘက်အထိ ပြန့်နံ့၍ နေသည်။ ပြိုင်ပွဲရက်ကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ နီးကပ်၍ နေချေပြီ ။ ဓမ္မသော က အေးရပြ။ီ
၁၂၉၈ ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်၊ ၁၉၃၆ ခု၊ ဧပြီ (၂၃)ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့ ၊
ထိုနေ့ကား ရက်ပေါင်းများစွာ သောကရောက်နေရရှာသော အလိုတော်ရ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီး
အဖို့ သောကထွက်ပြေး ဘ၀င်အေးရမည့် နေ့ ဖြစ်ပေသည်။ အာလံ(ယခုအောင်လံ)မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသ နာ ပြုကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကလေး အရှင် မဟာနန္ဒသည် ၀က်ထီးကန်သို့ ကိစ္စတစ်ခုအတွက် ဆိုက်ရောက်လာသည် ၊ ၀ါဒယှဉ်ပြိုင်ပွဲကို ကြားသိပြီး ဖြစ်သဖြင့် အခြေအနေကို စနည်းနာကြည့်ရာ မရေရာသော အဖြေကိုသာ ရရှိသဖြင့် သတင်းအတိအကျ သိရှိလိုသဖြင့် အလိုတော်ရကျောင်းသို့ လာခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးမှာ မူလကပင် ဆရာတပည့်ပမာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် အခြေအနေကို မေးမြန်းလျှောက်ထားကြည့်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်မရရှိသေးသည့် အ ကြောင်း သိရှိရလေတော့သည်။
``တပည့်တော်က ဦးဥေယျ ကိုယ်တော်ကြီး ခေါင်းဆောင် ဟောပြောမယ်၊ မန္တလေးနှင့်ပခုက္ကူက ကိုယ်တော်တွေလည်း ပါမယ်ဆိုတာနဲ့ အေးနေတာဘုရား ။ အခုဒီရောက်မှပဲ ဘယ်သူမှ မလာတော့ ဆရာတော်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိရတာပါဘုရား ´´
``……အဲဒီ မောင်ဥေယျတို့ မန္တလေး ၊ ပခုက္ကူတို့အကြောင်း မပြောချင်တော့ဘူး ၊ မောင်နန္ဒရယ် ၊ ရက် ကလည်း နီးလှပြီ၊ အဲဒါ မောင်နန္ဒ ကူညီနိုင်တယ် မဟုတ်လားကွယ်´´
``မှန်ပါ ကူညီနိင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော် ကိုယ်တိုင်တော့ ၀င်ရောက်ဟောပြော
``ဘယ်လိုလည်းဟဲ့ မောင်နန္ဒရဲ့ မောင်ပဇင်းဟာက ကူညီနိုင်တယ်လည်း ဆိုသေးရဲ့ ရှင်းအောင် လျှောက်စမ်းပါUီးကွယ်´´
``မှန်ပါ.တောင်တွင်းကြီးမြို့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် အရှင်ဥက္ကဌပါ ဘုရား´´
`` အော် …..တောင်တွင်းကြီးကိုး…….အနို့ သိက္ခာဝါ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွယ့်…
မောင်နန္ဒရဲ့ … ``သိက္ခာဝါ (၂၀) မပြည့်သေးပါဘုရား …..ဒီနှစ်လောက်မှ ပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်၊ အ သက် (၃၉)နှစ်လောက်ရှိပါပြီဘုရား ´´
``စာပေ ပရိယတ္တိဘက်ကကောကွယ့်´´ ၊ ``အသက်မကြီးပေမယ့် ပညာဂုဏ်တော့ မငယ်ပါဘုရား ၊ ၀ိသုဒ္ဓါရုံတိုက်ထွက်ပါ ကိုယ်ရင်ဘ၀ကပဲ ပိဋကတ်သင်ရိုး ကုန်ပြီးတော့ ရဟန်းတစ်ဝါအရမှာ စာချ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား´´
`` ပါဠိတော်တွေနှင့် အဋ္ဌကထာကြီးတွေကော နိုင်နင်းရဲ့လား….. အဲဒါက အရေးကြီးတယ်ကွယ့်´´ ၊ `` မှန်ပ…. ပါဠိတော်၊အဋ္ဌကထာ ၊ဋီကာ ၊ အနုမဓုယောဇနာဂဏ္ဍိ အား
အဓိပ္ပါယ်အကောက်အယူ ၊ စုတ်စောဒနာ ၊ သောဓနာ နည်းလေးဆယ် ၊ သံဝဏ္ဏနာ ဥတ်ကောက်
ဥပစာဆယ်ပါး ၊ နေတ္ထိနည်းအားလုံးကိုပဲ နိုင်နင်းကျွမ်းကျင်လှပါတယ်ဘုရား´´
``အင်…ဒီလိုဆိုရင်.. ပိဋကတ်အရာတော့ ကျမ်းဂန်စွယ်စုံ မှုံသောက်မာတင် ပညာရှင်ကလေး ပဲ ကွယ့်…. ဟို…ကုလားဖြူစာ ဘသန္တရကောတတ်ရဲ့လားကွဲ့´´
``မှန်ပါ……… ကုလားဖြူစာ အင်္ဂလိပ်စာသာမက သက္ကဋဘာသာ ဟန္ဒီဘာသာ ဘင်္ဂါလီနာဂရီဘာသာ အူရဒူဘာသာစတဲ့ ဘာသာစာပေ စကားများလည်း ဆရာတစ်ဆူ ပါဠဂူရောက်တတ်
မြောက်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဘုရား ၊ အနောက်ဘက် မဇ္မျိမ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ (၇)ခုနှစ်ကျော်နေပြီး၊ ဆရာမျိူးစုံထံမှ သင်ယူခဲ့တာပါဘုရား´´….. သာဓု …..သာဓု ၀မ်းမြောက်ပါဘိတော့ မောင်နန္ဒရယ်၊
အနို့….သူတို့ရဲ့ စာဖြူဘာသာကျမ်းတွေကော နိင်နင်းရဲ့လားကွယ့်´´
`` မှန်ပါ…စာဖြူဘာသာကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ သမ္မာကျမ်းတွေတင်မကဘဲ ပသီဘာသာ၊ ကိုရ်ရန် ကျမ်းနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ မဟာဘာရတ စတဲ့ ကျမ်းကြီးတွေကိုပါ တတ်မြောက်နိုင်နင်းပါ
တယ်ဘုရား ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ၀င်ရောက်ဟော
ပြောဆွေးနွေးခဲ့သူပါဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သတိမထားမိလို့ပါဘုရား၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်ကျော်
ကိုးနှစ်လောက်က (လယ်တီတရားသတင်းစာကြီးထဲမှာ) ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဟိန္ဒူဘာ
သာ၊ ပသီဘာသာတွေရဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးခဲ့ပါတယ်ဘုရား….အခုလည်း တိုးတက်ရေး မဂ္ဂ
ဇင်း ထဲမှာ စာဖြူတို့ ပသီတို့နှင့် အပြိုင်အဆိုင်ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေပါတယ်ဘုရား သူ့ကိုဘယ်သူ
မှ နိုင်အောင် မရေးနိုင်ပါဘုရား´´
``ဟာ….ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဒို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က အောင်ပွဲခံပြီဟေ့ ၊ ၀မ်းသာလိုက်
တာ မောင်နန္ဒရယ်…. အဲဒီကိုယ်တော်ဘွဲ့ ဘယ်သူကွယ့် ´´
``အေး….အေး …အဲဒီမောင်ဥက္ကဌကို အမြန်ဆုံးသာရအောင် ပင့်ပေတော့ကွယ်၊ ဂိုဏ်း
သံဃာများလည်း မောင် မဟာနန္ဒ ကို လိုအပ်သမျှ အားလုံး အကူအညီပေးကြကွယ့် ကြားလား…..
ကဲ ဟေ့ ငါ့ကိုဆွမ်းကပ်ကြစမ်း ၊ ဒီနေ့ သိပ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်ကွယ် … ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော့မယ်
အခုမှပဲ ရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားတော့သကွယ်…။
အရှင်မဟာနန္ဒ ရောက်ရှိလာသော သတင်းသည် ဦးပဇင်း ကိုရင် ကျောင်းသားများ မှတစ်ဆင့် ပြန့်နံ့ သွားရာ အလိုတော်ရရွာသာမက အနီးအနားရှိ ရွာများကပါ လူ/ရှင်/ရဟန်း တို့ရောက်ရှိလာကြသဖြင့် အလိုတော်ရကျောင်းတွင် စည်ကားနေသည်။
အရှင်မဟာနန္ဒမှာလည်း ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌအကြောင်းပြောရ မေးသမျှဖြေရနှင့် တစ်နေ့လုံး မနား ရတော့ပေ ။ ညဘက်တွင်လည်း ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မေးမြန်းသမျှ ဖြေ ကြားရ၏ ။ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးကား အရှင်ဥက္ကဌက ကဲ့သို့သော စွယ်စုံတိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးကို ရရှိ တော့မည်ဖြစ်၍ ၀မ်းသာရွှင်ပြနေလေသည်။ အရှင်မဟာနန္ဒသည် ၀ါဒပြိုင်ပွဲ စာချူပ်မူရင်းကို ကူးယူလိုက်ပြီး အိပ်ရာသို့ ၀င်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်ရေးသား ဖော်ပြပေးမည်မှန်သောလည်း အလုပ်သိပ်မအားပါသဖြင့် ဆက်ပြီး မရေးနိုင်သောကြာင့်
ဒီမှာ ဒေါင့်လုပ်ယူ၍ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။